Madaxweynaha oo la kulmey wakiillada dadka naafada ah ee Soomaaliyeed. | Somali Disability Empowerment Network - SODEN
Madaxweynaha oo la kulmey wakiillada dadka naafada ah ee Soomaaliyeed.
23 Maarso 2015, Muqdisho: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula yeeshay wakiillo ka socda una ololeeya sugidda xuquuqda dadka naafada ah.
Xubnahaas oo isugu jiray aqoonyahanno iyo shaqaale hey’ado kala duwan, waxay Madaxweynaha u soo bandhigeen baahida sharci ee loo qabo in Dastuurku uu damaanad qaado xuquuqda dadka naafada ah.
Wakiilladu waxaa kale oo ay Madaxweynaha hordhigeen baahida waxbrasho, midda shaqo iyo tan daryeel ee ay qabaan dadka naafada ah oo ay sheegeen in ay Soomaaliya ku badan yihiin, dagaalka sokeeye awgiis.
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ka dib markii uu dhegeystay talooyinka iyo codsiga wakiillada waxaa uu ballan qaaday in Dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay qaaddo tallaabo kasta oo lagu sugi karo xuquuqda dadka naafada ah, isla markaasna inta taagteedu ay tahay ay ku shaqeyn doonto siyaasad ku wajahan in dadka naafada ahi ay baahidooda daboolaan.
Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in Madaxtooyada laga sameyn doono xafiis qaabbilsan dabaggalka howlaha ku wajahan sugidda xuquuqda naafada.
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay in la qaban doono shirweyne Qaran oo wakiillo ka socda gobollada dalka si looga arrinsado sii horumarinta daryeelka naafada iyo sugidda xuquuqdooda.